I-FXCC MetaTrader 4
Ikhaya / Amapulatifomu / PC / I-MT4 ye-PC
ZITHATHELE ISICELO SOMSEBENZI
I-MetaTrader i-4 ingenye yezakhiwo ezivelele kakhulu zokuhweba ze-forex emhlabeni namuhla. Wonke amathuluzi okuhweba adingekayo kanye nezinsiza eziseduze ukuvumela abahwebi ukuba baqhube ucwaningo nokuhlaziywa, bangene futhi baphume kwezohwebo futhi basebenzise isofthiwe yokuhweba okuzenzakalelayo yenkampani yangaphandle (Abahloli Abahloli noma ama-EA). Awujabuli nge-EA etholakalayo kwezohwebo? I-MetaTrader isebenzisa ulimi lwayo lohlelo lwe-MQL4, elikuvumela ukuthi uhlele ama robot akho wokuhweba azenzakalelayo.
Isoftware yeMetaTrader 4 Broker inikeza ngamathuluzi amaningi wokuhlaziya. Izikhathi eziyisishiyagalolunye zitholakalela ithuluzi ngalinye lezezimali. Lokhu kunikeza ukuhlaziywa okuningiliziwe kwamandla we-quote. Umtapo wolwazi owakhelwe ngaphakathi wezinkomba namathuluzi angaphezu kwama-50 wenza lula inqubo yokuhlaziya, enika amandla abahwebi ukuthi bakwazi ukubona izitayela, bachaze ukwakheka okuhlukahlukene kwezimakethe, banqume izindawo zokuphuma nezokuphuma, baphrinte amashadi wanoma yiziphi izinsimbi futhi bazihlaziyele "ephepheni".
I-MetaTrader 4 ihlanganisa yonke imisebenzi yokuhweba izidingo zesimanje ze-forex zezimakethe. Imiyalo yeMakethe, ilindile futhi imisa imiyalo, ukuhamba okulandelanayo - konke kulungile lapho kanye ne-MT4.
Isiteji sivumela imiyalo ukuba ibekwe ngezindlela ezihlukahlukene, kufaka phakathi ukuhweba ngokuqondile kumashadi. Amashadi amathikithi ashicilelwe yindlela ewusizo kakhulu yokunquma amaphuzu angenayo namaphuzu okuphuma.
I-MetaTrader 4 ihlanganisa izixwayiso zezohwebo, ithuluzi eliwusizo lokukusiza ukulandelela indawo enhle kakhulu yokuhweba nemibandela yemakethe. Nge-Arsenal ye-FXCC ye-MT4 yokuhweba, wonke amandla akho angakhanjiswa ekusebenziseni amasu akho okuhweba, evikelekile ukuthi ulwazi lwamathuluzi ku-MT4 akhona ukukubuyisela emuva.
Njengazo zonke izinkokhelo zezezimali, ukulondeka kolwazi okudluliswayo kubaluleke kakhulu. Isofthiwe ye-FXCC MetaTrader 4 Broker idlulisela ulwazi kuye nakwezimakethe ekuxhumaneni kwe-128-bit encrypted. Lokhu kukhona ukuqinisekisa ukuphepha kwakho konke okuhweba kwakho. Ngaphezu kwalokhu, i-FXCC iphinde inikeze amathuba okusebenzisa ubuchule bokulondoloza obubanzi bokubukeka komkhiqizo womphakathi. Imininingwane evikelekile kule ndlela cishe akunakwenzeka ukuphazamisa noma yisiphi isikhathi esifushane.
I-MetaTrader 4 ifaka lonke uhla lwemisebenzi eqondakala kalula, ngakho-ke kuthatha imizuzu embalwa ukukhululeka ngazo zonke izinketho ezahlukahlukene ongazithola njengomhwebi. Ipulatifomu inomsebenzi owakhelwe ngaphakathi "Usizo" ukuze uthole izimpendulo zemibuzo ejwayelekile ngqo kusuka ngaphakathi kwesoftware uqobo, ukuze ukwazi ukugxila ezintweni ezibalulekile - ukuhweba.
Kunoma ikuphi, uma umsebenzi we-MT4 ungakwazi ukuphendula umbuzo wakho, opharetha bokusekela kwe-FXCC banga.
I-MetaQuotes uLimi4 (MQL4)
I-MetaTrader i-4 yokuhweba yesikhulumi ihambisana nolwazi lwayo olwakhiwe ngaphakathi lwezinhlelo zokuhweba izinhlelo. I-MQL4 ikuvumela ukuthi udale i-EA yakho (i-Expert Advisor) futhi usebenzise ngokuzenzakalelayo ukuhweba kwakho ngokusekelwe ohlelweni lwakho oluhleliwe. Ukusebenzisa i-MQL4 ungazakhela umtapo wakho wezinkomba ezinkambiso, izikripthi kanye nedatha yokusebenza. Njengoba inikezwe ukuthandwa yesikhulumi se-Forex MetaTrader 4 Broker, inamba enkulu yezingqungquthela nemiphakathi ye-intanethi ikhuphukile, lapho abasebenzisi bangakwazi ukuxhumana nokushintshanisa amathiphu namasu okuthola okuningi ngolimi lwezinhlelo ze-MQL4 kanye ne-MetaTrader 4 ngokujwayelekile.
Umeluleki wochwepheshe iyisistimu yokuhweba imishini (i-MTS) exhunywe kwezinye izindawo. Abacebisi abakwazi ukukutshela kuphela ukuthi kungenzeka ukuthi bangene emakethe, kodwa futhi benze amadili kwi-akhawunti yezohwebo ngokuzenzakalelayo futhi ubaqondise ngqo kuseva yezohwebo. Njengezinhlelo eziningi zokuhweba, i-MetaTrader 4 Trading terminal isekela amasu okuhlola kumlando womlando ngokubonisa okuvelele kokungena kokuhweba nokuphuma kwamaphuzu.
Izinkomba zangokwezifiso yi-MetaTrader 4 ethatha izinkomba zobuchwepheshe. Izikhombisi Zokwezifiso zivumela ukudala izinkomba ngaphezu kwalabo abavele bahlanganiswe ekugcineni kwe-MetaTrader 4. Njengezinkomba ezakhelwe kuqala eziza kuqala ku-MT4, izinkomba zenkambiso zihloselwe ukuhlaziywa kobuchwepheshe futhi azikwazi ukuvula noma ukuvala amathenda ngokuzenzakalelayo.
Izikriphthi zase yizinhlelo ezihloselwe ukukhishwa okulodwa kwezinyathelo ezithile. Ngokungafani nabacebisi be-Expert, ama-Scripts awasebenzisi ukuhlakanipha okwekhakheni futhi awakwazi ukufinyelela emisebenzini yezinkomba.
Libraries kukhona imininingwane yolwazi lomsebenzisi lapho kuvinjelwe khona amabhulogi asetshenziswayo wekhodi ye-MQL4. Uma uhlela isu elithile noma u-EA ku-MQL4, abasebenzisi bangadonsela emabhukwini abo omthamo bese bengeza le miisebenzi egcinwe kumarobhothi abo amasha okuhweba.